Sixirroole Adeegsan Jiray In Ka Badan 280 Jin Iyo Shadaadiin Ah Oo Toobbad Keenay Kana Warramay Qisooyinka Uu Samayn Jiray Ee Layaabka Badnaa | FooreNews
Home wararka Sixirroole Adeegsan Jiray In Ka Badan 280 Jin Iyo Shadaadiin Ah Oo Toobbad Keenay Kana Warramay Qisooyinka Uu Samayn Jiray Ee Layaabka Badnaa
Khartoum, February 12, 2018 – (Foore)- Nin Sixirroole ah oo lagu magacaabo Xaamud Aadan Muuse una dhashay waddanka Suudaan ayaa waxa uu ka toobbad keenay Saaxirnimadii uu ku shaqaysan jiray isaga oo sheegay in uu adeegsan jiray in ku dhaw 300 oo Shadaadiin iyo Jin isugu jira balse uu haatan noqday nin Alle u soo noqday iyo jidka wanaagsan.
Xaamud Aadan Muuse oo wakhtigan dusha ka xafidsan 30-ka Jis ee Qur’aanka Kariimka ah ayaa isaga oo u warramayay telefishanka Sacuudiga waxa uu ka sheekeeyey wixii uu samayn jiray markii uu ahaa saaxiirka iyo sida uu imika uga toobbad keenay, isaga oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: “Ilaahay baa mahad leh. Anigu waxaan bartay sixirka anniga oo yar. Maan garanayn dhibaatada uu leeyahay. Waxa aan ahaa wiil aad u da’ yar. Waxa aan bilaabay mar dambe in aan xafido Qur’aanka Kariimka ah. Waxa aan bartay Cilmiga sharciga ah ee Islaamka si aan u noqdao awliyada saalixiinta ah. Manaan doonayn in aan saaxir noqdo. Waxaan u baxay gudaha waddankayga Suudaan iyo dibaddaba. Waxaan naqtiimay qur’aanka marar badan oo aan akhriyey. Waxa la igu yidhi Qur’aanka kariimka ahi waxa uu leeyahay siro badan oo aan la gaadhin iyo cilmi badan oo hoose oo aanay aadamuhu gaadhin in ay koobaan oo wada fahmaan. Cilmiga qarsoon waa kan awliyada iyo dadka saalixiinta ahi ay ku dhaqmaan. Waa midka ay awliyadu ku dhaqanto iyaga oo aan cabsoonayn ama baqanayn. Intaasi kadib waxaan u dhaqaaqay in aan barto siraha ku qarsoon Qur’aanka kariimka ah iyo waliba cilmiga adduunka ee kale. Nin baa igu qalqaaliyey oo aan garanayn waxaasi ninbaa igu yidhi Awliyadu afarta kitaab iyaga ayaa ka masuul ah iyo waliba koonkan oo dhan in ay masuul ka yihiin. Anigu waxaan markaa ka mid ahaa jihooyinka ay nimankaasi maamulaan. Runtii anigu ujeedada aan u imid ma aanay ahayn in ana sixirka barto. Intaa kadib markii aan ogaaday in aan sixirka bartay ayaan is idhi waxaad tahay wali saalix ah. Waxaan la macaamilay caalamka Jinka iyo Shadaadiinta. Waxaanan bartay cilmiga sixirka, taasaana sabab u ahayd in aan ka soo laabto dariiqa xun ee aan maray. Waxaan gartay in waxani qalad yahay. Waxa maalin ii yimid nin I moodaya in aan ahay wali saalax ah oo aan cabsan oo aan murugoon. Dadku way I waynayn jireen oo waxaan ahaa sida ay moodayeen nin karaamo leh”.
Xaamud Aadan Muuse oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi: “Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ii yimid nin. Waxa uu igu yidhi waxaan doonayaa gabadh. Gabadhaasi reerkoodu nin kale ayay la doonayaan. Waxa uu igu yidhi waxaan rabaa in aan gabadha helo ama aan iska dhinto. Waxa aan waydiiyey magaca inanta iyo magaca hooyadeed. Waxa aan u ballan qaaday in ay dhammaantood ay jilbihiisa hoos iman doonaan. Kadib sixir ayaan sameeyey oo inantii baan sixray. Subaxdiiba waxa aan arkay gabadhii iyo reerkoodii oo doonaya ninkii ay diidanaayeen markii hore. Inanta hooyadeed waa curyaan. Waxaanan arkay iyada oo u sii gurguuranaysa xaggii ninkii. Arrintaasi qalbiga way gashay oo saamayn bay igu yeelatay. Ninkii waxa uu kaxaystay gabadhii uu doonayay ee aan u sixray. Reerkii waxa ay igu yidhaahdeen gabadhii waan u guurinaynaaye noo soo celiya. Aabbaheed ayaa ii yimid oo aan garanayn in aan ahay anigu ninka sixray gabadha. Waxaabu iigu yimid in aan wax ka xalliyo arrinkeeda. Waxa aan ku idhi orod oo guriga ku laabo waxaad arki doontaa arrintii oo dhammaatay sidii ayaanan kaga furay inantii sixirkii. Nin jin ah ayaan u yeedhay waxaaanan ka codsaday in arrinkii ninka ay sidii hore ku soo celiyaan. Kadib arrinkiina sidii hore ayuu ku soo laabtay oo inantii caadi baan ka dhignay”.
“Waxaan la macaaamaloon jiray 280 jin, waxaana ku jiray kuwo waaweyn oo aan caadi ahayn iyo Cirfiidyo waaweyn iyo kuwo yaryar iyo kuwo waaweynba. Waxa ay iga dalbadaan ayaan siin jiray. Markii aan ka tagay shaqadooda waxa ay aniga iila macaamiloodaan in ay iigu hanjabeen in ay I dilayaan sidoo kalena ay ii gaysanayaan khasaare dhinaca maalka ah. Laakiin anigu dheg uma dhigin oo Ilaahay ayaan ka nabad galay. Qof wanaagsan ayaa ii yeeshay in aan adkaarta subaxa iyo galabta ka akhristo waanan ka nabad galay”. Ayuu yidhi Xaamud Aadan Muuse
Previous PostWasaaradda Ganacsiga Oo Ku Fashilantay Inay Ganacsatada Shidaalku Dhimaan Qiimaha Shidaalka Ee Kor U Kacay & Qodobadii Shalay Oo Aan Qiimihii Hore Waxba Ka Dhimin Next PostXildhibaan Sheegay In Aanay Jabuuti Marnaba Ogolayn Somaliland Walaacna Ka Muujiyey Sida Ay Dhex Ugu Noqon Karto Wada Hadalada Somaliland Iyo Soomaaliya